Fananan-tany ao Toamasina : « Olana ny fahapotehan’ny boky » -
AccueilSongandinaFananan-tany ao Toamasina : « Olana ny fahapotehan’ny boky »
Isan’ny olana atrehan’ireo mpiasan’ny fananan-tany ao Toamasina ny fahapotehan’ny boky ao amin’izy ireo, ka manano sarotra ny asa atrehin’izy ireo. “Ny mpiasa tsirairay avy dia samy nahatsapa izany rehefa nanontaniana ny olana atrehin’izy ireo. Efa antitra loatra mantsy ny boky, ka izay no mahatonga izany fahasimbana izany. Na izany aza dia miezaka manao izay tratry ny ainy ny rehetra mba hahazoan’ny mpanjifa fahafaham-po”, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny sampandraharahan’ny Fananan-tany ao Toamasina, Franklin Razafindratazo, nandritry ny lanonana fifampiarahabana tratry ny taona nataon’ny fianakaviamben’ny fananan-tany ao Toamasina.
Tazoninay ho teny filamatra ny “fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny”, izay teny filamatra napetraky ny M2PATE , minisitera mpiahy anay, hoy ny fanazavana. “Mba ho fanatanterahana io teny filamatra io, dia miezaka izahay manamora ny fikarakarana ny antontan-taratasin’ireo mpiray tanindrazana tonga eto aminay. Mikasika ny fikarakarana ny fangatahana tanim-panjakana, dia niisa 300 teo ho eo, ka nanatanterahana ny ODOC
( opération domaniale concerté), ary efa mandeha ny fanomanana ny ampahany manaraka”, hoy hatrany Franklin Razafindratazo.
Fanamby lehibe apetrak’izy ireo kosa ny ady amin’ny kolikoly. Misy ny paikady napetraka, tahaka ny fanaovan’ny mpiasa tsirairay “badge” mba ho mora ny fanavahana azy amin’ny mpanera. Eo ihany koa ny fametrahana ho hitan’ny rehetra amin’ny alalan’ny peta-drindrina ny lisitry ny vola aloha amin’ny saran’ny asa atao. “Fa fanamby lehibe apetrakay koa ny fiaraha-mientana mba hahavitana miaraka an’iny fanamby ho an’ny fisandratan’ny Madagasikara 2030 vina izay napetraky ny Filoha Hery Rajaonarimampianina iny”, hoy kosa izy namarana ny fanazavany.